Enwere ọtụtụ ọgba aghara na ntanetị n'ịntanetị taa na ihe kpọmkwem akpaaka ahịa bụ. Ọ dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla tụlere otu esi eziga ozi-e dabere na ihe kpatara ya na-akpọ onwe ha akụrụngwa ahịa. Anyị amụtala site na onye na-akwado ngwa ahịa ahịa anyị, Right Na mmekọrịta, na e nwere njirimara dị iche iche nke usoro akpaaka ahịa nke onye ọ bụla na-ere ahịa kwesịrị ịchọ:
Ntapu na ịkpalite Izi ozi - Mgbe ụfọdụ, ịkpalite email, dịka ọ dị n’ihe banyere ụgbọ ahịa ịzụ ahịa hapụrụ ọrụ, na-arụ ọrụ nke ọma. Mana oge ndị ọzọ ịkwesịrị ịgafe ozi bara uru nke na-agwa gị atụmanya gị ruo mgbe ha dị njikere ime ihe ma ọ bụ zụta. Drip ahịa dị oke egwu, na-ewetara onye natara ozi mgbe ha chọrọ ma ọ bụ chọọ ya.